Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Serivisy hotely tanteraka Manendry faritra GM Wayne Woods
Wayne Woods dia notendrena ho mpitantana jeneraly vaovao ho an'ny trano fandraisam-bahiny Absolute Hotel Services Vietnam. Izany dia nambaran'ny filoha lefitra zon'ny Operations - Asia, Andriamatoa Frank Clovyn.
Andriamatoa Woods dia niasa tamin'ny naha mpitantana jeneraly niaraka tamin'ny Rydges Hotels & Resorts tany Sydney ary avy eo Adelaide izay nanampiany tamin'ny fampitomboana ny fivezivezena, ny vola miditra amin'ny efitrano, ary ny vola azo avy amin'ny sakafo sy zava-pisotro ho an'ny trano roa.
Ilay teratany aostraliana, Wayne Woods, dia nanatevin-daharana ny Absolute Hotel Services tamin'ny taona 2017 ho mpitantana jeneralin'ny Eastin Grand Hotel Saigon. Nandritra ny roa taona sy tapany lasa izay, vokatry ny fitiavany sy ny fanolorany tena tamin'ny andraikitra naneho ny fitomboana ara-bola matanjaka, ny haavon'ny fahafaham-po ny mpanjifa, ary ny fanaterana ny kalitaon'ny serivisy.
Wayne dia nanomboka ny asan'ny fandraisam-bahiny ho talen'ny fitantanana vola ao amin'ny Marriott International Dubai tamin'ny 2002. Tamin'ny 2007 dia nifindra tany Sydney, Australia izy mba ho lasa Group Corporate Revenue Manager ao amin'ny Rydges Hotels & Resorts ary voatendry ho Assistant General Manager ao amin'ny Rydges Hotels & Resorts any Cairns alohan'ny nahatongavany ho Tale Jeneraly tamin'ny 2009.
Tamin'ny 2013 dia notendrena ho toy ny tale jeneralin'ny vondrona Hotely Aostralianina Trust any Melbourne izy, toerana namerenany indray ny tranony avy amin'ny hotely Rydges ka hatrany Accor.
"Faly izahay mampiroborobo an'Andriamatoa Woods amin'ny anjara andraikiny vaovao, mino izahay fa ny fahalalàny be dia be eo amin'ny sehatry ny hôtely dia manome azy fahatakarana tsara momba izay tafiditra amin'ny toerany. Hanohy ny andraikiny amin'ny fitantanana ankapobeny ao amin'ny Eastin Grand Hotel Saigon izy ary hikarakara ny asan'ny hotely any Vietnam, "hoy Andriamatoa Clovyn.